Google Burmese Translation – ကြီးတော်နွား အလကားကျောင်းခြင်း | Lionslayer : The Legend
Google Burmese Translation – ကြီးတော်နွား အလကားကျောင်းခြင်း
Google Burmese Translation
Once again, I’m trying to finish up the google search translation. (My first attempt was 2007 nov and dec with Zawgyi. I managed to finished about 12% which wouldbsure to give the headache to the later translaters with Unicode). Now most of the translations r quite completed. So let’s try together at least to beabeta stage accepted by google. What I’m doing right now is:
အခု Google မိန်းပေ့ချ်ကို ဘာသာပြန်နေတာ ၁၀ဝ ရာနှုန်း ပြီး(သလိုလိုတော့ရှိ)ပါပြီ။ အခုလုပ်နေတာတွေက
1) proof reading
2)spelling, grammar and sentence sequence checking
စာလုံးပေါင်း၊ သတ်ပုံ၊ သဒ္ဒါ နှင့် ဝါကျ အထားအသို စစ်ဆေးခြင်း
ဝါကျများ ကျစ်လျစ်အောင် သံခိပ်ခြင်း
4) translating the remaining chaos
ဖြစ်သလို ဖြည့်ထားသည့် ကျန်နေသေးသော ဝါကျများကို ဆက်လက်ဘာသာပြန်ခြင်း
The main contributors have the privilege to change the translations instantly.
So, plz help us by
1) reporting the translation errors or doubts
2) fixing urself if u can
ဒါကြောင့် အမှားလိုက်ရှာပေးခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းနဲ့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ယူနီကုတ်များကို ဒီနေရာက တခါတည်း Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တွေ့တဲ့အမှားတွေ လိုအပ်ချက်တွေ လာပြောသွားနိုင်ပါတယ်။
Let’s finish in two or three days.:)
That was what I posted in MITP at December 3, 2009. I guess I’m the only one who is doing regular maintenance for translations for now 😛 .. It’saboring job and it consumed lots of my own times. Google still not approved it and keep adding new translations. I hope my efforts will pay off some day.
3 Responses to “Google Burmese Translation – ကြီးတော်နွား အလကားကျောင်းခြင်း”
Google translation က ျမန္မာစာ ျပသနာ ေျဖရွင္းေပးေစလိုပါတယ္။
Window 10 သံုးပါတယ္။
Google in Myanmar Language #updated « Lionslayer: The Legend says:
[…] been lately the major contributor of Google in your language, Myanmar, main site. I kept translating, cleaning up the raw translations, converting Zawgyi encodings to Unicode and maintaining the main […]